लघुकथा "विचार र अनुभूति" को पाठकीय टिप्पणी
लघुकथा “विचार र अनुभूति” को पाठकीय टिप्पणी
बन्दना घिमिरे – एक दर्जन भन्दा बढी पुरस्कार र प्रशंसापत्रद्वारा सम्मानित आदरणीय साहित्यकार नन्दलाल आचार्यले मिति २०७८/६/२१ गते हाम्राे लघुकथा पाठशाला फेसबुक पेजमा प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा “विचार र अनुभूति ” पढेपछि मेराे पाठक मनमा आएका विचार र अनुभूतिलाई यहाँ पस्कने जमर्को गरेकी छु । केहि भुलचुक भएमा साहित्यकार ज्युले ओैल्याईदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु ।
साहित्यकार नन्दलाल आचार्यलाई मैले लघुकथा समाज प्रदेश १ काे प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कथा ” छुटप्रसाद” पढेपछि सुनेकी र चिनेकी हुँ । त्यसपछिका दिनमा म उहाँका कथाहरु देख्नेबित्तिकै पढछु । उहाँ बेलका नगरपालिका -२, सिध्दार्थटाेल, गल्फरिया, उदयपुरका स्थायी बासिन्दा र श्री जनता माद्यमिक बिद्यालय गाेलबजार-४, सिराहाका शिक्षक हुनुहुन्छ ।
उहाँका प्रकाशित कृतिहरु युग उचाल्ने अक्षरकर्मीकाे अबसान( नाटक २०६६), गरुराहा ( उपन्यास २०७६),
एक हाते जीवन ( निबन्ध २०२१), पुण्य कार्कीको कथाकारिता ( समालाेचना २०७७), समय शल्यक्रिया (कथा संग्रह) , इच्छुक बकपत्र ( निबन्ध संग्रह ),टुक्के दिदी र उखाने दाइ ( बाल एकाङ्की ),जुइनाे (कथा संग्रह) र छुटप्रसाद ( लघुकथा संग्रह) रहेका छन् ।
प्रस्तुत लघुकथा बिचार र अनुभुतिमा मनुष्य भित्र दुई शत्रुका रुपमा रहेका विचार र अनुभुती दुई पात्र रहेका छन् । शत्रु १ र शत्रु २ ।
एकपटक यस सृष्टिको खातिर भन्दै दुई शत्रुका बिच अन्तरक्रिया भएको थियाे । एकले अर्कोलाई दाेषाराेपण गर्ने क्रम जारी थियाे । पहिलाेले भन्याे – तँ मान्छेलाई अलमल्याउन माहिर छस् ।वर्तमानलाई ओल्टाईपल्टाई गरेर जीवन चल्छ र ? अर्कोले निकैबेर साेचविचार गरिकन दिव्यज्ञान प्राप्त भएझैं आफ्नै स्वभाव विपरीत बाेलेझैं मान्दै सतर्क बन्याे ।
पुन: पहिलाे नै बाेल्याे मेराे प्रश्नको जवाफ दिन नसके म सँग लम्पसार परेर क्षमा माग्दा भईगयाे नि । किन आलटाल गर्नुपर्याे ? यस्तो पहिलाेकाे विचार सुनेर दोस्रोलाई खपिनसक्नु भयाे रिस उम्लेर आयाे ।तुरुन्तै उसले आफुलाई सम्हाल्दै रिसाााउनु र रिस प्रकट गर्नु अर्कोकाे काम हाे भन्ने साेच्दै सहज भावमा भन्याे सरी, अहिले केहिबेर छुट छ भन्दैमा मख्ख नपर तिमी र म बिच आकाश जमिनकाे सम्बन्ध छ ।म भएको ठाउँमा तिम्रो प्रवेशमा निषेध छ । तिमीकहाँ म आफ्नो स्वभाव लिएर आउने कुरै आउदैन ।पहिलाे साेचमा डुवेकै बखत दोस्रोकाे स्वर थपियाे तिमी मनुष्यलाई दास बनाउछौं म मनुष्यलाई सम्पूर्ण रुपमा दासताबाट मुक्ति दिलाउछु ।
अन्त्यमा दुवैको अन्तरक्रियाबाट बाहिरी जगत पहिलाेले र भित्री जगत दाेस्राेले घुमाउने निचोड निस्कयाे र आ आफ्नो स्थानमा रवाना भए । ती दुई शत्रु १ काे भुमिकामा मनुष्यकाे विचार र शत्रु २को भुमिकामा मनुष्यकाे अनुभुती रहेकाे थियाे । यसरी कथाकाे अन्त्य भएको छ ।
कथामा दुई शत्रु विचार र अनुभूति मनुष्य जीवनमा सदैव रहिरहन्छ र एकअर्कालाई शत्रुको रुपमा हेरेपनि दुवैको सहकार्य विना जीवन चल्न सक्दैन भन्ने शाश्वत सत्यलाई कथाले उजागर गरेकाे छ । एउटा जीवनकाे दुईपाटाकाे रुपमा विचार र अनुभूतिलाई लिईएकाे छ । बिचारले एउटा बाटाे देखाउछ भने अनुभूति वा अनुभवले अर्को । विचार भन्दा अनुभव केही परिपक्व रहेकाे हुन्छ भन्नेकुरालाई सम्वादकाे माध्यमबाट प्रष्ट पारिएको छ । याे बिचमा जबसम्म दुईको सहमति हुन सक्दैन तबसम्म मनुष्यले कुनै निर्णय लिन सक्दैन अनिर्णयको बन्दी हुन्छ भन्दै अन्त्यमा कथाकारले दुईको सहकार्य, सहयाेग र सहयात्रामा जाेडदिदै कथाकाे अन्त्य भएको छ ।
कथालाई प्रतिकात्मक रुपमा हेर्दा कुनै पनि दुई शक्तिले आफुलाई नै ठुलाे ठान्छन् तर परिवर्तनको लागि दुवैको उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ । एक रथका दुई पाङ्ग्रा जसरी सँगसँगै हिडेमा मात्रै परिवर्तन हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि कथाले संकेत गरेकाे छ ।
२४० शब्दमा लेखिएको कथा सरल र सुवाेध्य छ । जीवन र जगतकाे सत्यता उजागर भएको छ । कथा सकारात्मक परिवर्तनको बाहक रहेकाे छ । सहयोग र सहकार्यमा जाेड दिदै जस्तोसुकै समस्या पनि अन्तरक्रिया वा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने शाश्वत सत्य उजागर गर्न सफल हुनुभएको छ कथाकार ।कथा शत्रुता बाट शुरु भई सहमतिमा अन्त्य भएको छ यसकारण लघुकथाकाे मानकमा थपक्क बसेकाे अनुभव भएकाे छ मलाई ।
अन्त्यमा सिध्दहस्त साहित्यकार नन्दलाल आचार्यज्युकाे साहित्यिकयात्राले सगरमाथाको शिखर चुमाेस । शैक्षिक क्षेत्रमा नेपालका सरकारी बिद्यालयका शिक्षकहरु सिर्जनशील छैनन भन्ने जनमानसको भ्रम चिर्न सफलहुनुहाेस भन्दै उहाँको सु-स्वास्थ्य, दिर्घायु तथा अटल श्री बृध्दीकाे कामना गर्दछु ।
लघुकथा– विचार र अनुभूति
एक पटक यस सृष्टिको कल्याणका खातिर भन्दै दुई शत्रु बीच आमनेसामने भएर अन्तरक्रिया भएको थियो ।
‘एई, तँ मान्छेलाई अलमल्याउन माहिर छस् । वर्तमानलाई ओल्टाईपल्टाई गरेर पनि जीवन चल्छ र ?’
शत्रु–१ को विचार सुनेर शत्रु–२ को अनुभूति केहीबेर अलमलमा पर्यो । उसले शत्रु–१ का कुरामा निकैबेर गम खायो । केहीबेरमै उसलाई दिव्यज्ञान प्राप्त भएझैँ लाग्यो । आफूले आफ्नै स्वभाव कुल्चेको ठहर भयो र तुरुन्तै सतर्क बन्यो ।
‘मेरो प्रश्नको जवाफ दिन नसके मसँग नै लम्पसार परेर क्षमा माग्दा भइगयो नि ! किन आलटाल गरिराख्नु पर्यो ?’
शत्रु–१ कोे व्यङ्गयात्मक विचार र कटु कुरा सुनेर शत्रु–२ को अनुभूतिलाई खपिनसक्नु भयो । भित्री मनदेखि नै रिस उम्लेर आयो ।
रिसाउनु र रिस प्रकट गर्नु शत्रु–१ को काम हो; आफ्नो हुँदै होइन भन्ने सोचेर शत्रु–२ ले सहजभावमा भन्यो; ‘सरी, अहिले केहीबेरलाई छुट छ भन्दैमा मख्ख नपर । म र तिमी बीच आकाश–जमीनको सम्बन्ध छ । म भए ठाउँमा तिम्रो प्रवेश निषेध छ । तिमीकहाँ म आफ्नो स्वभाव लिएर जाने कुरै आउन्न ।’
शत्रु–१ सोचमा डुबेकै बखत शत्रु–२ को अर्को स्वर थपिएको थियो; ‘तिमी मनुष्यलाई दास बनाउँछौ अर्थात् कैद गर्छौ । म मनुष्यलाई सम्पूर्ण रूपले दासत्वबाट मुक्ति दिलाउँछु ।’
अन्ततः दुबैको अन्तरक्रियाबाट मनुष्यलाई बाहिरी जगत् शत्रु–१ ले विचरण गराउने कुरा भयो । भित्री जगत् भने शत्रु–२ ले घुमाउने निचोड निस्कियो । यसै कुरामा ल्याप्चे लगाएर उनीहरू दुबै आआफ्नो स्थानमा रवाना भए ।
ती दुई थिए– शत्रु–१ को भूमिकामा मनुष्यको ‘विचार’ र शत्रु–२ चाहिँ मनुष्यको ‘अनुभूति’ ।
October 9, 2021 5:10 pm | Ads, ट्रेन्डिङ, विचार/ब्लग, विविध, साहित्य